2500Ton Precision High Pressure Aluminom Alloy Cold Chamber Die Casting Machine
Igwe ihe nkedo anwụ-nrụgide dị elu
DC Series Cold Chamber anwụ nkedo igwe
DM Series Hot Chamber anwụ nkedo igwe
HT Series Hot Chamber anwụ nkedo igwe
MT Series Cold Chamber anwụ nkedo igwe
Igwe ihe nkedo anwụ anwụ dị ala
Igwe ihe nkedo nke Gravity Die
Onye na-ewepụta akpaaka
Ihe na-efesa akpaaka
Igwe ihe na-eme mmanụ aṅụ
Ngwakọta akpaaka ntọhapụ
Aluminom Alloy Furnace
Ọkụ na-agbaze na-etinye uche
Igwe ọkụ na-agbaze nke CTM Series
Igwe ọkụ na-agbaze ọkụ eletrik
Igwe ọkụ na-ejide ọkụ eletrik
Igwe ọkụ Rotary Crucible Eletriki
Igwe ọkụ na-agbaze gas
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ nke nwere ike imebi gas
Igwe ọkụ na-ejide gas
Ngwa & Akụrụngwa emetụtara
Igwe ọkụ Magnesium Alloy
Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ M Series
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe T
Eletriki Magnesium Furnace H Series
Igwe ọkụ Magnesium Eletriki J Series
Igwe ọkụ Magnesium Eletriki U Series
Nnwale Magnesium Furnace E Series
Akwụkwọ ntuziaka Magnesium Furnace C Series
Ngwa & Ngwa emetụtara
anwụ nkedo ebu
Anwụ nkedo erimeri
Ndị nnọchi anya mwepụta nkedo
Egbe ịgbasa akwụkwọ ntuziaka
Mmanụ Plunger mmanu
Nkedo nke nrụgide dị elu
Achọrọ onye nnọchi anya
Ezigbo onye mmekọ gị maka igwe nkedo anwụ anwụ.
DC usoro oyi ụlọ anwụ nkedo igwe, Ọ bụ ọhụrụ usoro mepụtara na-adịbeghị anya, na elu na-eri arụmọrụ. Anyị na-enye 700ton / 2500Ton Precision High Pressure Aluminom Alloy Cold Chamber Die Casting Machine na 2 afọ akwụkwọ ikike. Anyị raara onwe anyị nye ịnwụ igwe nkedo ọtụtụ afọ, na-ekpuchi ahịa Russia, India, South-East Asia na South-America. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya na-akpakọrịta ogologo oge na China.
1. A na-eji ihe nkedo nodular mee ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ihe alloy pụrụ iche. na ezi ductility na ike mma banye mmetụta ike nke injection; Ịdị elu elu elu, nke ọma belata ọnwụ extrusion na akara mmetụta. The formwork adopted thickened imewe iji hụ na formwork elu adịghị mfe sag na mgbaji n'oge ojiji ogologo oge.
2. The ibughari ebu platen adopts na ọgịrịga efere Ọdịdị imewe, nke na-abụghị nanị enhances ike nke etiti efere si Ọdịdị, ma na-edozi a usoro nke nsogbu dị na thimble a kwụsịtụrụ Ọdịdị a na-ejikarị na ụlọ ọrụ.
3. A ga-enye nkwonkwo niile na-akpụ akpụ nke igwe na osisi alloy ígwè, na usoro nchaji mmiri oyi na-atụ oyi, nrụgide nkwonkwo ga-adị otu, ka o wee gbasaa ndụ ọrụ nke ọma nke ọma.
4. Dị ka imewe ọkọlọtọ nke ibubata igwe, ọkara ugboro nhazi na-nakweere maka eri nke tie-bar, nke mma ike ike na-eyi iguzogide nke eri ụzọ, na-edozi nsogbu nkịtị nke ebu ukpụhọde na eri nje na ụlọ ọrụ. .
5. The igwe isi adopts integral I-ekara nchara Ọdịdị na-agbakwụnye ígwè beam support Ọdịdị. Ejikọtara ya na usoro ọgwụgwọ okpomọkụ, ọ nwere nkwụsi ike ka mma na ọ dịghị mfe imebi, na-ejigide ihe ziri ezi nke ogologo oge eji igwe eme ihe.
6. The pụrụ iche alloy ihe na okpomọkụ ọgwụgwọ usoro na-nakweere maka tie-ogwe, na vetikal na kehoraizin abụọ ụzọ nrụgide ntọhapụ usoro na-agbakwunyere iji hụ na mụ clamping ike nke dum igwe na ogologo ọrụ ndụ nke tie- mmanya.
7. Usoro injection dị elu, nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ntinye aka na-arụ ọrụ, nke nwere usoro nchekwa nchekwa ike dị elu, na-eme ka sekit mmanụ nke usoro ịgbatị ahụ dịkwuo mma, na-ebelata ọnwụ n'ime usoro nnyefe ike, ntinye ngwa ngwa na-eru 60g, na na-eme ka nkwụsi ike na nkwughachi nke parampat isi dịkwuo mma. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji usoro ntinye ihe na-arụ ọrụ nchekwa ike na-akpaghị aka, mgbakọ na-akpaghị aka na ọrụ dakọtara nke nrụgide nchekwa ike, ọrụ nkwụsị nrụgide nrụgide, ọrụ nkwụsị nke nitrogen, ọrụ nbudata akpaka, wdg.
8. Cartridge valve oghere mmeghe nhazi usoro, onwe-mepụtara katrij valve mmeghe nhazi usoro, dozie nsogbu teknụzụ nke isi ike mgbanwe na ụlọ ọrụ.
9. The ọdịdị imewe edu nke ụwa na-eduga ulo oru imewe otu nyere ọhụrụ imewe maka fọrọ nke nta 2000 ahịa gburugburu ụwa, na nnukwu na bara uru ọdịdị.
PLC Sistemụ njikwa
PLC na-anabata ihuenyo mmetụ agba Omron / Siemens yana njikwa ọgụgụ isi.
Usoro ịgba ọgwụ
Usoro nchịkwa nchịkwa nke ọma nke ọma, nke nwere ike ịhazigharị, dabara adaba maka mmepụta nke ngwaahịa dị elu dị iche iche.
Sistemụ Njikwa Hydraulic
Enwere ike ịhazigharị sekit mmanụ, nrụgide na ọsọ na-akpaghị aka.
Nhazi nhazi ihe ngbanwe ike dị elu na-eme ka ntọala igwe kwụsie ike na nke na-adịgide adịgide. A na-eme ka ọkpụkpụ na ntụgharị dị ike, na-agbatị aka uwe nduzi nke efere etiti site na 30%, nke na-eme ka nkwụsi ike dị elu na nguzozi nke arụ ọrụ platen.
Sistemụ mmanu mmanu
Central akpaka mmanu usoro, oge lubrication toggle, melite n'ibu ndụ na ibelata mmezi.
Elu ike n'ibu Ọdịdị, abụọ ejector cylinder (≥300Ton).
Beechapụ imewe nke sekit mmanụ iji hụ na arụ ọrụ siri ike nke sistemu hydraulic.
Nkà na ụzụ izugbe
Sistemụ nchekwa ike nke Servo moto /Sistemụ jụrụ oyi (nhọrọ)
1. Ịrụ ọrụ dị elu na ịdị mma na nchekwa ike
Igwe ihe nkedo anwụ na-emezigharị nrụnye mgbaba na-adabere na ntọala kọmputa. The mkpokọta ike ịzọpụta mmetụta nwere ike iru 45% ~ 75%.
2. Obere mkpọtụ
Mkpọtụ n'oge ọrụ nkịtị na-erughị 65dB, iji nweta ọrụ dị jụụ ma melite gburugburu ebe ọrụ.
3. Nzaghachi ọsọ dị elu
Oge nzaghachi siri ike nke sistemu zuru oke bụ ihe na-erughị 50ms, yana nrụpụta nrụpụta na-abawanye site na 5% ruo 7% karịa ụdị nkịtị.
4. Njikwa nkenke dị elu
Ndozi PID nke sistemu sistemu na nrụgide nke onye na-anya mmanụ jụrụ oyi na-eme ka a na-achịkwa izi ezi nke usoro mmanụ niile n'ime 0.3% iji hụ na ịdị mma ngwaahịa.
5. Mmụba nke ndụ ọrụ
Ugboro abụọ mechiri emechi nke nrụgide na-asọ asọ na-eme ka igwe ahụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ ma na-enwe ike ikwughachi nke ọma, na-ebelata oke iku ume, na-ebelata iyi nke ihe dị iche iche na ịgbatị ndụ ọrụ.
Sistemụ njikwa injection emechi emechi ozugbo (nhọrọ)
Ịgba ọgwụ na ezigbo oge mgbanwe nke isi paramita iji hụ na nkwụsi ike na nkenke usoro kachasị elu.
1. Ọsọ ọsọ nke agba nke mbụ mgbe niile
Kachasịkwara nkeji mbụ iji wedata ma ọ bụ zere ọnyà ikuku n'oge tupu ejuputa.
2. Kpọmkwem na ngwa ngwa ịgbanwee na ngwa ndochi ngwa ngwa
Mgbanwe ziri ezi na ndochi ngwa ngwa iji nweta usoro ịgba ọgwụ dị mma.
3. Ngwa ngwa na kpomkwem mgbanwe-n'elu ka intensification na-adọ
Ngwa ngwa na kpomkwem mkpalite nke usoro mmesiwanye ike iji mee ka nrụgide ngwa ngwa wulite oge.
4. breeki ọsọ na njedebe nke oghere oghere
Ịgba breeki n'ọsọ ịgba ọsọ dị elu, ọ bụghị naanị na-ebelata nrụpụta ọkụ kamakwa ọ na-abawanye ndụ ọrụ anwụ.
Nke gara aga: 280Ton High Pressure Zinc Alloy Hot Chamber Die Casting Machine
Osote: 400Ton Precision High Pressure Zinc Alloy Hot Chamber Die Casting Machine
DC2500 Cold Chamber Die Casting Machine Specification List
Ihe Nkeji DC2500
Ngalaba njigide Ike njigide KN 25000
Ọrịa strok na-amachi mm 1500
Oghere dị n'etiti mmanya tie(HxV) mm 1500×1500
Nha Platen (HxV) mm 2350×2350
Kee dayameta mmanya mm 310
Ọkpụrụkpụ ebu mm 700-1800
Ike mwepụ KN 750
Ọrịa strok mm 300
Ngalaba ịgba ọgwụ Ike igba ogwu KN 1800
Ịgba ọgwụ strok mm 1100
Ọnọdụ ịgba ọgwụ mm -200.-400
Dayameta plunger mm 140-180
Ibu ogwu ogwu (AL) Kg 30-55
Ibu ogwu ogwu (MG) Kg 21.6-39.6
Nrụgide nkedo (nrụgide) Mpa 115-70
Mpaghara nkedo CM2 2150-3500
Oke. Mpaghara ihe nkedo (40MPa) CM2 6250
Ntinye ntinye mm 450
Dayameta flange aka uwe mm 280
Ọkụ flange na-apụta elu mm 30
Ndị ọzọ Usoro nrụgide MPa 16
Ike moto KW 135
Mmanụ tank ikike L 3000
Ibu igwe Tọn 165
Akụkụ igwe (L×W×H) mm 14000x4600x4500
Usoro DC oyi ụlọ anwụ anwụ nkedo igwe ọkọlọtọ & nhọrọ nhọrọ
Ihe nhazi DC180 DC238 DC300 DC350 DC380 DC400 | DC550 DC700 DC900 DC1000 DC1300 DC1650 DC2000 DC2500 DC3000
Njikwa nhata okpukpu abụọ nke ebu mepere & mechie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
njikwa ngbanwe nso nke ọrịa strok mepere emepe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Njikwa transducer strok nke ọrịa strok mepere emepe Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ọsọ ọsọ ebu nso ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ndozi ịkpụzi akwụkwọ ntuziaka ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ndozi ịkpụzi akpaaka Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ngalaba ịgba ọgwụ
Ịgba ogwu nke abụọ+ na-eme ka njikwa ngbanwe ụkwụ aka ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Njikwa nha nha nha eletrik Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
strok njikwa mgbanwe nso ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ọkwa nkwalite na njikwa nrụgide siri ike ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Igwe ọkụ na-adọkpụ isi
Mgbanwe mbịgharị mbịpụ ọrịa strok ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Otu nku anya mkpochapụ ● ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Eyeliner mkpochapụ okpukpu abụọ － － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Core puller-1 setịpụrụ na platen mbughari ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Core puller-2sets na platen mbughari － － － － － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Core puller-1 atọrọ na platen edoziri Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Core puller-2sets na platen edoziri － － － － － － ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Omron PLC / Siemens PLC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7 inch ihuenyo mmetụ dị elu ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ihuenyo mmetụ dị elu nke inch 10 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● ● ● ● ● ●
Ngwa mkpu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plunger lunbrication unit Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Okwu: 1. ● Standard Ο Nhọrọ - Anaghị etinye
2.Anyị na-edobe ikike ime mgbanwe ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ nkọwapụta na-enweghị ọkwa mbụ.
DC Series oyi ụlọ anwụ nkedo igwe na- wildly eji maka ụgbọ ala ụlọ ọrụ, ọgba tum tum ụlọ ọrụ, nkwukọrịta ụlọ ọrụ, kichin cookware, okporo ụzọ oriọna ụlọ ọrụ, wdg. Isi ihe eji eme ihe bụ aluminum alloy, ọla kọpa alloy, magnesium alloy. Ndị a bụ ikpe na ngwaahịa ndị ahịa anyị n'ezie.
Akụkụ nkedo akpaaka
Akụkụ mkpuchi moto
Ihe mkpuchi oriọna LED Ụlọ ọrụ ọkụ
Ngwa ngwaike ngwaahịa Akụkụ ite & Pan
Igwe oyibo anwụ anwụ
Igwe nkedo anwụ anwụ
Igwe ihe nkedo na-ekpo ọkụ na-anwụ anwụ
Ndị na-emepụta igwe na-ekpo ọkụ na-anwụ anwụ
Ecotrust Ngwa igwe
Amara ama ama maka igwe ihe nkedo anwụ.